'झरी परेको दिन' प्रेमिकाको सम्झनामा... :: अनुषा अधिकारी :: Setopati
'झरी परेको दिन' प्रेमिकाको सम्झनामा गाएको हैनः बबिन प्रधान
अनुषा अधिकारी काठमाडौं, पुस २४
गायक बबिन प्रधान। तस्बिरः नारायण महर्जन/सेतोपाटी
३१ जुलाई, १९९२
बैंकक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थाई एयरवेजको जहाज काठमाडौं उड्यो।
नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि हवाई ट्राफिक नियन्त्रण र पाइलटबीच सञ्चार समस्याले थाई एयरवेजको जहाज लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकको पहाडमा ठोक्कियो।
जहाजमा सवार १ सय १३ जनाको मृत्यु भयो।
यही घटना सम्झँदै गायक बबिन प्रधानले गाए– ‘झरी परेको दिन’।
गीत सुपरहिट भयो। धेरैले अनुमान गरे, दुर्घटनामा बबिनकी प्रेमिकाले ज्यान गुमाइन्। उनले प्रेमिकाकै सम्झनामा यो गीत गाएका हुन्।
आजको दिनसम्म धेरै जना यो कहावतमा विश्वास गर्छन्।
उक्त गीत रिलिज भएको २६ वर्षपछि गत साता दरबारमार्गको एउटा क्याफेमा हामीले बबिनलाई यही कुरा सोध्यौं।
‘मैले थाई एयर दुर्घटनामा परेका मृतकहरूको श्रद्धाञ्जलीस्वरुप गीत गाएको थिएँ,’ बबिनले भने, ‘धेरैलाई प्रेमिकाको सम्झनामा गीत गाएको भ्रम छ। रेडियो र पत्रपत्रिकामा पनि यो कुरा सत्य होइन भनेर बारम्बार भन्दै आएको छु। तै मानिसहरू विश्वास गर्दैनन्।’
बबिनले गाएका अधिकांश गीत मायाप्रेमका अनुभूति मिसिएका र भावनात्मक छन्। उनका पुराना गीत आज पनि उत्तिकै रुचाइन्छ। उनी त्यस्तै मायाप्रेमले भरिएका नयाँ गीत रिलिज गर्ने तयारीमा छन्। सोह्रवटा रेकर्ड गरिसकेको उनले बताए।
गायक सचिन रौनियारको ‘हे मान्छे’ गीत म्युजिक भिडियोमा देखिएका बबिन अचेल कन्सर्टमा पनि व्यस्त छन्। केही साताअघि उनले ‘एट डिग्री’ रेस्टुरेन्टमा एकल कन्सर्ट गरेका थिए। रेस्टुरेन्टमा उनको यो पहिलो कन्सर्ट हो।
‘प्रायः म रेस्टुरेन्टमा गाउन मन पराउदिनँ,’ उनले भने, ‘होटल र रेस्टुरेन्टमा कलाकारलाई बोलाएर गीत गाउन लगाउनु कलाकारको मान घटाउनुजस्तो लाग्छ। त्यहाँ कलाको कदर हुँदैन। मानिस गीतभन्दा मदिरामा झुमिरहेका हुन्छन्।’
पछिल्लो कन्सर्ट पनि साथीहरूको करकापमा परेर गाएको उनले बताए।
बबिन मेलोडी गीत गाउन रुचाउँछन्। आफैं पनि नारायण गोपाल, बच्चु कैलाश जस्ता गायक र चर्चित बेलायती ब्यान्ड पिंक फ्लोइडजस्ताको गीत सुन्छन्। गीतमा शब्द र संगीतको राम्रो संयोजन हुनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ।
पुराना गीत सुन्न रुचाउने बबिनलाई नयाँ गीत–संगीतमा आएको परिवर्तनमा आपत्ति भने छैन। ‘समयको मागअनुसार परिवर्तन त हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले नयाँ कलाकारलाई अवसर दिनुका साथै उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न मद्दत पुर्याउँछ।’
कुनै गायकको गीत अर्कैले गाउने 'कभर' गीतमा भने उनी आपत्ति जनाउँछन्। त्यसले असली गायकलाई छायामा राख्ने र असली कलाकार नजन्माउने उनको तर्क छ।
लामो समय संगीतमा जोडिएका बबिन संगीत क्षेत्रमा टिकिरहन गाह्रो देख्छन्। अन्य व्यवसायमा नजोडिएको भए आफु पनि यो क्षेत्रमा टिक्न सक्दिनथेँ कि भन्ने उनलाई लाग्छ। तै विभिन्न सांगीतिक प्रतियोगिताले नयाँ कलाकारलाई भने बाटो खुलेको देख्छन्।
‘नेपाली संगीत क्षेत्रमा आउन खोजी रहनुभएका कलाकारलाई म स्वागत गर्छु। सफलताका लागि निकै प्रयास र धैर्य राख्न भने सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्योसँगै कला र संगीतको मान राख्न कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन।’
बबिन पनि यी सबै चरण पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेका हुन्। करिअरको सुरुआती दिनमा केही कठिनाइ झेल्नुपरेको उनको अनुभव छ।
उनका बुबा इन्जिनियर। छोरा संगीतमा लागेर बिग्रियोस् भन्ने चाहन्थेनन्। घरमा संगीतको माहोल पनि थिएन। परिवारका सबैले उनको रुचिलाई बेवास्ता गरे।
तर, उनको रुचिलाई के ले रोक्ने!
पछि उनले आफ्ना साथीभाइसँग गीत गाउन थाले। भन्छन्, ‘गीत गाउन रुचि भए पनि कसरी गाउने, कता गाउने भनेर ज्ञान थिएन। त्यसैले एउटा साथीको आमासँग छ महिना तालिम लिएको थिएँ।’
उनको सांगीतिक नशा झन् झन् बढ्दै गयो। एसएलसीपछि उनले गीत नै तयार पार्ने सोचे।
‘त्यति बेला मलाई पैसाको निकै खाँचो थियो,’ बबिनले भने, ‘घरपरिवारसँग माग्ने आँट थिएन। साथीभाइसँग मागेँ। करिब १४ सय जति जम्मा पारेको थिएँ।’
मागेर जम्मा गरेको पैसाले गीत त तयार पारे, तर सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्यौलले रिलिज गर्ने आँट आएन। कयौं दिन त्यत्तिकै थन्किए। पछि साथीभाइले कर गरेपछि रिलिज गरे।
उनको त्यो पहिलो रिलिज गीत थियो– प्रियसीको मन जित्ने।
बबिनले यो गीत रेडियो नेपालमा बजाउन दिए। पहिलो गीत नै रेडियो नेपालको छनौटमा पर्यो।
त्यो समय गीत गाउनै सास्ती भोग्नुपरेको उनको अनुभव छ।
‘राति १ बजेतिर चारैतिर सामसुम भएपछि गीत रेकर्ड गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘कहिले त गीत गाउँदा गाउँदै बीचमा एम्बुलेन्स गुड्थ्यो। अनि फेरि सब काम सुरुबाट गर्नुपर्थ्यो।’
त्यसको तुलनामा अहिले गीत रेकर्ड गराउन सजिलो छ। बबिन भने लामो समय संगीत क्षेत्रबाटै हराएजस्ता भए। नयाँ पुस्ताका कतिले त उनलाई चिन्न पनि छाडिसके। कता व्यस्त थिए उनी?
‘समयको दौडसँगै मानिसको चालचलन र उसले बनाउने गीत–संगीतमा परिवर्तन आउन थाल्यो,’ बबिन भन्छन्, ‘नयाँ पुस्ताको रोजाइ र चाहनालाई मध्यनजर राखेर मैले केही वर्ष उनीहरूको गीत सुनेँ। धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ।’
यसका साथै व्यक्तिगत व्यवसायमा पनि व्यस्त भएको उनले बताए।
बबिन मात्र होइन, उनका धेरै समकालीन यसरी नै सांगीतिक क्षेत्रबाट हराइरहेका छन्। कतिपयले आफ्ना पुराना गीतमा नयाँ ‘कमब्याक’ गरिरहेका छन्।
बबिन पनि यही ‘कमब्याक’ को प्रतीक्षामा छन्। अहिलेसम्म रेकर्ड गरिसकेका १६ वटा गीत रिलिज गर्ने तयारी गर्दैछन्।
‘पुराना संगीत मात्र राम्रो हुन्छन् भन्ने ढिपी राख्नु हुँदैन। आधुनिकतालाई पनि मान्यता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले रेकर्ड गराएका नयाँ गीतमा मैले हाम्रो समयको संगीतमा आधुनिकता मिसाएको छु।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २४, २०७५, ०५:१७:००
काठमाडौंबाट विशेष ब्युरोको टिम नै गएको थियो विप्लवका सर्लाही इन्चार्ज खोज्न
कल बाइपास र डाटा लिक गर्ने कम्पनीलाई मोबाइल सिस्टम म्यानेजमेन्टको जिम्मा दिएको भन्दै उजुरी
जसले माइतीघरमा आन्दोलनकारी र प्रहरीलाई पानी खुवाउँदै हिँडेका थिए
बिएमडब्लु पछि सन्दीपले किने बुलेट बाइक
नेपालमा दर्ता हुन आए चिनियाँ कम्पनी वीच्याट र अलिपे
सलमान खानले प्रितमलाई भने- तिमी मजस्तै छौ, देखिन्छौ एउटा, गर्छौ अर्कै
‘लप्पन छप्पन २’ बन्ने पक्का, गरियो शुभ-मुहूर्त
'प्रेमगीत ३'मा शिव र सुनिल